Kutheni ukuya kwi-sauna kuyafaneleka - i-sauna yabaqalayo
Iingcebiso zokutyelela i-sauna yokuqala
Uluhlu olulungileyo lweseshoni ye-sauna?
Iiseshoni ze-sauna rhoqo azilungele impilo yakho yempilo kuphela, kodwa ukukhululeka. Inzululwazi ibonisa ukuba akukho zigidi ze-5 zabantu kwi-2 yezigidi ze-saunas eFinland. EJamani kwakhona, abantu baninzi bafunga ngeempembelelo ezikhuthaza impilo, emzimbeni nasengqondweni.
Kutheni kubalulekile ukuba uye kwi-sauna?
Ngokukodwa ngexesha lokubanda, kunengqiqo ukuba ne-sauna rhoqo. Ngokusebenzisa i-sauna, yonke inyama kunye ne-immune system, iyakwazi ukuphazamiseka kwintsholongwane ye-pathogenic.
Kubantu abanobuhlungu obunzima ngenxa yentlungu okanye ukuxhatshazwa, kuyacetyiswa ukuba uye kwi-sauna. Ngezona ziphumo ezilungileyo, isigulane isifo sifanele silale kwisisu sakhe ixesha elide, ukwenzela ukuba ubushushu obuvela kwi-blanket ye-sauna bukhawuleze ngqo emva. Oku akugcini nje ukubuyisela izihlunu emva, kodwa nomphefumlo. Nangona kunjalo, akubalulekanga ukulala apha lonke ixesha, kodwa nokuhlala phakathi phakathi kokugcina ukusabalalisa. Iingxaki ze-rheumatic nazo zinganciphisa ukutyelelwa kwe-sauna rhoqo.
Izifo ezithile zesikhumba, ezinjenge-acne, iseshoni yeveki yeveki kufuneka ihlelwe. Ubushushu buhlutha ngokunyanisekileyo i-skin pores ehlanganiswe ne-sebum. Oku kuqhubela phambili inkqubo yokuphilisa.
I-Sauna inconywa kungekhona nje kuphela kwimpembelelo yayo emzimbeni, kodwa kwakhona ukubuyiswa kwengqondo. Abantu abaninzi banokubandezeleka ngenxa yokwesaba nokuxinezeleka, ezo zombini zingaphulwa ngempumelelo ngokuya kwi-sauna. Ukutyelelwa kwe-sauna kukhuthazwa kwakhona ngenxa yokuphazamiseka kokulala, njengoko ukujuluka kukhuthaza ukudinwa kakuhle, okubangela ukuba ulale ngokukhawuleza kwaye uqale usuku luphumle kakuhle ekuseni.
Ukufudumala kwe-sauna kunefuthe elihle kumntu wonke. Ukushisa okugqithiseleyo kudlula kwesikhumba kuwo wonke umzimba kunye nokushisa komzimba kuphakama ku-3 ° Celsius. Kule nkqubo, yonke imisebenzi yokuxilisa iminyanya iyenyuka, ukusasazwa kwandisa kwaye ukukhuselwa komzimba kuqiniswa ngokomoya.
• Kubalulekile ukuba uqaphele ngaphambi kohambo ngalunye ukuya kwi-sauna le sauna kwaye ukhawuleze ungahambelani. I-sauna nganye ityelele ixesha elifanelekileyo kufuneka ilungiselelwe ukuphumla nokubuyisela ngokufanelekileyo.
• Kuphela ithawula lokuhlamba kunye nezicathulo kufuneka zithathwe kwi-sauna. Zonke iigrafu kufuneka zisuswe kwangaphambili, ngenxa yokuba zivuthayo zitshisa kwaye zingabangela ukulimala. Kungcono ukushiya iiglasi ngaphandle kwaye ubuyele kwii-lens zokudibanisa, kuba uncedo olubonakalayo luya kubakho ngokukhawuleza.
• Kunokwenzeka ukuba, kufuneka ugwenywe ukuba ulambile kwi-sauna okanye udle ngaphambi kokukrakra, njengoko oku kungakulungele ukuhambisa. Ngokufanayo, iziyobisi ezinxilisayo mazifanele zotyle ngexesha leseshoni ye-sauna.
• Abo baphuma kwi-sauna eshisayo akufanele bajonge ngqo kwi-pool yokubhukuda, kodwa kuqala bepholisa ngokukhawuleza emanzini baze baqale ukubhukuda.
• Ngokomlinganiselo, i-1 kunye ne-2 ilitha yomzimba womzimba zilahleka xa uthatha i-sauna, ekufuneka ibuyiselwe emzimbeni ngokukhawuleza. Oku kulungile kakhulu kumanzi amaminerali.
Ngaphambi kokungena kwi-sauna kufuneka ihlulwe ngokukhawuleza ukuba ilahle umziphi na. Emva koko umile kakuhle, ukuze i-sweat kwi-sauna ayichaphazelwanga ngumswakama osileyo.
Ekuqaleni, ithawula lokuhlamba kufuneka ibekwe kwigumbi le-sauna phakathi okanye kwibhanki ephezulu, apho i-porter ye-sauna ingahlala phantsi okanye ilale. Ukutyelelwa kwe-sauna kufuneka kulungelelaniswe iiseshoni ezimbini okanye ezintathu ze-sauna. Umzimba udinga phakathi kwe-8 kunye ne-10 imizuzu ukunyuka ukuya kwiqondo lokushisa, kodwa ukuba ukufudumala kukuziva kungakhululekile ngaphambili, umvuzo kufuneka uqalwe ngaphambili.
Emva kweseshoni yokuqala ye-sauna, sincoma inwabi epholile okanye ebandayo kubalandelayo kubhebha womoya kunye nexesha lokuphumla elincinci le-20 nge-hydration. Ukuze ukhusele ukusasazwa ngexesha lokubanda kwamanzi, kuboniswa ukuba usebenze amanzi kuqala ngaphaya kwesinyawo sokunene, phezu komlenze kunye neengalo, uze uqhubeke nohlangothi lwesobunxele ukusuka phezulu ukuya phezulu. Emva koko i-sauna inokutyelelwa kwakhona kwi-12 kumzuzu we-15.
Ngokuqhelekileyo kungcono ukuhlala kwi-sauna kunokulala. Ngenxa yoko, akukho kuphela ukusabalalisa okuzinzile, kodwa ii-pores zivule ngakumbi. Ekutyelelweni kokuqala kwi-sauna kufuneka usebenzise amabhentshini aphantsi, njengoko kushushu kakhulu.